एमाले मिलौतीको कसौंडिमा डढेलो वास्ना : समसामयिक टिप्पणी - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ ११, मंगलवार ०९:२७
नेकपा एमालेभित्र पाकिरहेको खिचडि, अव कसौंडि सहित डढेलो वास्ना सहित बाहिर आएको छ । जनमतबाट दुरी ताढिन्छ कि भन्दै, केही मिलौंमिलौं तर नमिलौं है भन्नेहरु र कोही, नमिलौंनमिलौं तर मिलौं पनि भन्नेहरुको खिचडि पाकेर गलेन मात्र, त्यो डढेर वरपर हस्को दिइसकेको छ ।
मिलौतिको कथा रचना थियो । दुवै कित्ताका नेतामा मन डढेको वास्ना दुनियाँले थाहा पाइसकेको हो । कथामा यसलाई बन मात्र डढेको है, मन त सन्चो पार्न सकिन्छ भनेर गरिएको पटकथाको सामान्य अध्याय थियो । जस्लाई दुई थरीको कार्यदल नामांकन गरिएको पोष्टर बजारमा ल्याईयो ।
कार्यकतौ केहिदिन रनभूल परे । एकता एकता र एकता सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरी भए, त्यो पोष्टरपसिन खुब विक्यो । केहिरात त विचरा सोझा नेतालाई गतिलो निद्रा लाग्यो । केही महिना बोलचाल बन्दभएका छिमेकी कामरेडसँग बोलचाल, सुःख, दुःखका कुराकानी भए । ‘माथिल्ला नेताहरु मिल्नुपर्छ हाम्रो त के छर’, केही भावनात्मक कुराहरुपनि भए । तर अव यो डढेलो वास्नाले त्यो छिमेकमा ठुस्सको गन्ध दियो । झ्यालबाट उता फर्केर ‘ओए, भात डढो ? को हो यो भात डढाउँने ?’ भन्दै एकअर्कालाई दोषारोपणका प्रश्न सोध्ने समय सिर्जना गरिदिएको छ ।
एकातिर कार्यदलमा सहमतिका कथा रचना गरिने र अर्कोतिर मिलाप नचाहने माधव समुहको तौरतरिका, उता कार्यदल बनाएर अलमल पार्ने तर आफ्नो गति नछाड्ने केपी ओली प्रवृत्ति दुवै एमाले एकताका लागि दुईमुखे कसौडि थियो ।
दुई मुखे कसौडिमा कसकस्ले के के हाले त्यो पाकेन, डढेर गाउँदै जनजनमा अगतिलो वास्ना दियो । अन्ततः अवस्था मिलौतिको विपक्षमा पुग्यो । भोली दुईचार बात मार्न पाईन्छ, गाली गलौज र विचरा कार्यकर्ताकाअघि ‘हामीले त लाख कोसिस गरेकै हो ।’ भनेर भन्न मिल्छ भनेर गरिएका तथानाम रचनाहरु सत्य हुन् । सही हर्कत भने कसैका होईनन् ।
कहीं कार्वाही, कहीं पार्टिको ह्वीप उल्लंघन, कहीं पार्टिमा छलफल र सल्लाह विना सत्ताहितका अनैतिक खेल, आपसका चालवाजी अहिष्णु नै थिए । गतिविधिहरु एकले अर्कालाई सम्मान भन्दा बढी अपनाम र शाख गिराउने प्रकृत्तिकै छन र थिए ।
यो अवस्थामा कहाँ कस्को मिलौति हुन्छ र ? अव अन्तिम विकल्प, जस्लाई जो प्यारा लागेका छन् । तिनै पार्टि भडुँवाहरुको पक्ष÷विपक्षमा लाग्ने र तलसम्म मिलेका साथीभाईबीच भनाभन, मारामार गर्ने, प्रदेश, जिल्ला, गाउँ, टोलमात्र होइन, घरघरमा दुईभाई बहिनी, श्रीमान/श्रीमतिसमेतमा माथिल्ला नेताका नामबाट सम्बन्ध विगार्ने राजनीति परिस्कृत भएको छ ।
पार्टि भँडुवाहरुको पक्ष विपक्षमा देश त विग्रियो नै, राजनीति दर्शन, शिद्धान्त र विचारका कुरा तल्ला कार्यकर्ताले गर्नु बींड विनाको बाउसोले खेत खन्नु नै होला । अझ यो राजनीतिले साथीभाई र घरपरिवार, प्यारा-प्यारीको सम्बन्धचाहीं नविगारोस् । राजनीति पछि गरौंला, आफू पहिला सचेत बनौं । छिमेकीको कसांैडि जलिहाल्यो, गन्धपनि आयो कोहि वात नहीं, घरको कसौंडि नजलाऔं । पार्टिका नाममा परिवारमा डढेको गन्ध नबाँडौं ।
बागलुङमा आज थप एकजना संक्रमितको मृत्यु